Akhri-Maxaa todobaadkii dhammaaday u qabsoomay xukuumadda Soomaaliya. – Radio Daljir
Seteembar 24, 2016 12:58 b 0
Muqdisho, Sep 24 2016–Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa ka warbixiyey horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay.
Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Dowladda Federaalka oo xoojineysa Amniga Doorashooyinka, Maxkamada Ciidamada oo xukuntay maleeshiyaad sheegtay Daacish, Ciidanka Dowladda oo Maleeshiyada Al-Shabaab ka saaray Ceelwaaq, Horjoogihii Maleeshiyada Al-Shabaab ee Aw-Dheegle oo la dilay, Madaxweynaha oo sagootiyey Guddiga Korjoogtada Dacwada Maxkamada Caalamiga ah ee Hague, Waaxda Iskaashiga Caalamiga oo la hirgeliyey, 200-Arday oo ka faa’iideysatay aqoon kororsi Cilmi Baarista Dhismayaasha, Dhalinyarada oo Qiimeyn ku sameysay hirgelinta Lixda Tiir ee Dowladda iyo Wasiirka Amniga oo Tababar u soo xiray ciidanka Booliska.
Dowladda Federaalka oo xoojineysa Amniga Doorashooyinka
19kii September 2016 waxaa Muqdisho lagu qabtay kulan looga hadlay amniga doorashooyinka dalka, waxaana kulankaasi goob joog ka ahaa Guddiga Amniga Doorashooyinka Qaran, Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal iyo qaar ka mid ah madaxda laamaha amniga dowladda Soomaaliya. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa la isku dhaafsaday aragtiyo kala duwan oo la xiriira amniga doorashooyinka iyo sidii loo heli laa istaraatiijiyad guud oo lagu hago amniga doorashooyinka oo lagu wado in uu ka dhaco gobollo kala duwan. Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Avv. Cumar Dhagey ayaa sheegay in loo baahan yahay nidaam guud oo lagu hago amniga doorashooyinka, si looga hortago qatarta kooxaha nabad diidka ee ku howlan carqaladeynta doorashooyinka lagu wado in dhawaan ay ka dhacaan gudaha dalka, waxa uuna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay la shaqeeyaan laamaha amniga dowladda si looga hortago wax kasta oo Qatar ku ah amniga.
Maxkamada Ciidamada oo xukuntay maleeshiyaad sheegtay Daacish
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya gaar ahaan qeybta Lixdanaad, ayaa xukuntay maleeshiyaad katirsan kooxda Daacish, oo dhawaan lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Maleeshiyada la xukumay ayaa gaaraya ilaa iyo afar ruux waxaana lagu kala magacaabaa, 1- C/Casiis Xasan Mursal oo lagu eedeeyey in kooxda Daacish ay usoo wakiilatay magaalada Baydhabo, si uu uga fuliyo falalka guracan ee kooxdaasi. 2- Mahad Nuur Siidow oo isna lagu sheegay inuu yahay ninka kooxda daacish ay wakiilka uga dhigatay in Baydhabo uu ka fuliyo qaraxyada, isagoo la tilmaamay in uu awood u leeyahay in gacantiisa uu ku sameeyo waxyaabaha qarxa. Labada kale ee maleeshiyaad ayaa lagu kala magacaabaa Maxamed Sheekh Maxamed iyo Cali Maxamed Gaabow oo lagu eedeeyey in labaduba ay u xilsaarnaayeen fulinta dilalka qorsheysan ee kooxda Daacish ay ku talo gashay iney ka sameyso magaalada baydhabo.
Ciidanka Dowladda oo Maleeshiyada Al-Shabaab ka saaray Ceelwaaq
Ciidanka Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ayaa 17kii September 2016 ku guuleystay in Maleeshiyada Al-Shabaab ay ka saaraan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, oo maleeshiyadaasi ay soo weerareen 16kii September 2016. Ciidanka ayaa gudaha u galay degmada, waxeyna ka saareen maleeshiyaadka Al-shabaab degmada Ceelwaaq. Dadka degmada iyo saraakiil katirsan ciidanka dowladda ayaa sheegaya in ciidamo katirsan AMISOM gaar ahaana kuwa Kenya, iyo ciidanka dowladda Soomaaliya ay u diideen maleeshiyada Al-Shabaab in ay kusii nagaadaan magaalada, oo ay dhibaateeyaan shacabka ku nool degmada Ceelwaaq.
Horjoogihii Maleeshiyada Al-Shabaab ee Aw-Dheegle oo la dilay
Howlgal qorsheeysan oo ay wadajir u fuliyeen ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM ayaa lagu dilay horjoogihii maleeshiyada Al-shabaab ee dagmada Aw-dheegle ee gobalka Shabeellaha Hoose. Howlgalka oo dhacay habeennimadii 15ka September 2016 ayaa ciidamada weerar qorsheysan ka fuliyeen degmada Aw-dheegle, iyagoo sidoo kale soo furtay hub iyo saad ciidan oo ay lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Afhayeenka Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM, Jeo Kibet ayaa xaqiijayay in howlgalkaasi lagu dilay horjoogihii Kooxda al shabaab Maxamed Xasan, sidoo kalana Ciidamadu ay gacanta ku dhigeen hub ay lahaayeen maleeshiyaadka Al-shabaab. Degmada Aaw-dheegle ee gobalka Shabeellaha hoose ayaa qiyaastii 75Km dhinaca galeed ka xigta magaalada Muqdisho, waana deegaan caan ku ah dhinaca wax soo saarka tacbashada beeraha.
Madaxweynaha oo sagootiyey Guddiga Korjoogtada Dacwada Maxkamada Caalamiga ah ee Hague
Madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 17kii September 2016 sagootiyey guddi korjoogto ah oo aaday Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda (ICJ) ee ku taala magaalada Hague ee dalka Holland. Guddigaan ayaa halkaasi u tagi doonaa sidii ay ula socon lahaayeen dacwada Badda ee u dhaxeysa dalalka Kenya iyo Soomaaliya oo 19kii September 2016 ka furantay magaalada Hague ee dalkaasi Holland. Madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muujiyey sida dowladda Soomaaliya ay ugu kalsoontahay in ay ku guuleysato dacwadaasi, maadaama Soomaaliya si sharci ah ay u martay dacwada la xiriirta muranka Badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda Soomaaliya ayaa Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda u gudbisay dacwad ka dhan ah dowladda Kenya, oo ku xad gudubtay qeyb kamid ah Badda Soomaaliya.
Waaxda Iskaashiga Caalamiga oo la hirgeliyey
Wasiir kuxigeenka iyo Qaar kamid ah Agaasimayaasha kala duwan ee Wasaaradda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ee Xukuumadda Soomaaliya, ayaa 19kii September 2016 kormeereen Dhismaha Cusub ee Waaxda Iskaashiga Caalamiga ee Wasaarada oo dhawaan laga hir-galiyay gudaha xarunta wasaaradda Arimaha Dibadda, si ay ugu shaqeeyaan waaxda iskaashiga caalamiga. Wasiir kuxigeenka iyo Masuuliyiinta kale ayaa waxay mid mid u galeen Qolalka uu ka kooban yahay Dhismaha sidoo kale waxay masuulayiinta kulamo la qaateen, shaqaalaha waaxda iskaashiga caalamiga oo ay ku dhiira galiyeen in ay dar-dargaliyaan shaqada wanaagsan ay u hayaan dalka. Agaasime kuxigeenka waaxda iskaashiga caalamiga Wasaarada Qorsheynta, Maxamed Daahir Farax sheegay in Dhismahan cusub loo dhisay Waaxda Iskaashiga Caalamiga waxaana u dhistay Midowga Yurub. Wasiir kuxigeenka Wasaarada Qorsheynta Iskaashiga Caalamiga dowladda Soomaaliya mudane Cabdulaahi Sheekh Cali ayaa sheegay in Wasaaradda ay ku talaabsatay horumaro balaaran waaxyaha kala duwan ee Wasaarada taasina ay Hormuud ka yahiin shaqaalaha wasaarada.
200-Arday oo ka faa’iideysatay aqoon kororsi Cilmi Baarista Dhismayaasha
Waxaa 23kii September 2016 loo qabtay in ka badan 200 oo arday oo ka kala socota 10 Jaamacadood oo ku yaala gudaha Magaalada Muqdisho, aqoon kororsi ku aadan sababaha keenay in dhismaha guul daro ku timaado ama uu soo duma. Barnaamijka aqoon korarsiga waxaa ku jiray Cilmi baaris lagu sameeyey qaab dhismeedka daaraha si gaar ah kuwa ka samaysan birta oo hadda ku hor leh Soomaaliya. Eng- Cabdixakiin Axmed Shuriye oo bare ka ah qaar kamida Jaamacadaha magaalada, shaqada dhismahana ku hawlan, cilmi baarisna ku sameeyey ayaa bixinayey aqoon kororsiga, waxaana iska kaashaday oo fududeey Xarunta Hurumarinta iyo Shaqa Abuurka ee Rajo iyo Shirkadda Dhismaha ee Global. Ugu dambeyn waxaa ardada la gudoonsiiyey Shahaadooyin.
Dhalinyarada oo Qiimeyn ku sameysay hirgelinta Lixda Tiir ee Dowladda
Madaxweynaha Jamahuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xassan Sheekh Maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya fiidkii 22kii September 2016 kulan wada-tashi ah kula yeeshay qeybaha kala duwan ee dhallinyarada Soomalaiyeed. Kulanka oo qeyb ka ah taxanaha Talowadaag & Xaldoon oo uu taabbageliyo Ururka Dhallinyarada SYV ayaa lagu lafa guray waxyaabaha ka qabsoomay Tiirarkii lixda ahaa ee Dowlada Federaalka Soomaaliya, iyadoo dhallintu ay Madaxweynaha siiyeen talooyin dhaxal gal ah oo qeyb ka noqon kara qorshaha qabyatirka howlaha Qaran. Dhalinyaradan oo ka kala timid qeybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyaro ciidamada katirsan, Dhalinyaro ganacsato ah, Dhalinta Garsoorka ka shaqeeysa ama bartay, Dhalin ku taqasustay xiriirka caalamiga ah, Dhaqaatiir, macalimiin, u dhaqdhaqaaqayaal arrimaha bulshada, Dhalinyaro Gobolada ka timid, Qurbajoogta iyo wariyeyaal. Dhallinyaradu waxa ay isla qireen guusha laga gaaray hirgelinta Qorshaha Lixda Tiir iyagoo hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in la qabyatiro howlahaasi soo socday si loo gaaro horumar waara.
Wasiirka Amniga oo Tababar u soo xiray ciidanka Booliska
Wasiirka Amniga Gudaha Mudane Cabdirisaaq Cumar Maxamed iyo Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed S/guuto Maxamed Shiikh Xasan Xaamud ayaa 23kii September 2016 uga qeybgalay Dugsiga sare ee Booliska ee Jen. Kaahiye ee Magaalada Muqdisho Xaflad ballaaran oo lagu soo gunaanadayay Tababar-meheradeedka Saraakiisha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed ee sanadkan 2016-ka. Warbixin koobaysay afarta tababar-meheradeed oo lagu qabtay dugsiga sare ee Booliska ayaa waxaa ka faa’iideysteen saraakiil gaareysa ilaa iyo 140 Sarkaal, iyadoo lagu bartay arrimo ay ka mid yihiin howlaha Booliska iyo shuruucyo kala duwan. Wasiirka Amniga Qaranka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdirisaaq Cumar Maxamed iyo Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed S/guuto Maxamed Shiikh Xasan Xaamud oo goobtaasi ku guddoonsiiyay Shahaadooyin xubnihii uu tababarku u soo dhammaaday ayaa ugu dambeyntii ka soo jeediyeen hadallo u badan dardaaran oo loo jeediyay Saraakiisha tababarka loo soo xiray.
DHEGEYSO-Soomaaliya oo rajo ka muujisay natiijada dacwaddii badda.